AC480V 0-10V Mamay LED Driver China Manufacturer
Home > Products > 200-480Vac High Voltage Input LED Treiber > Linear Aluminium IP67 480V Input LED Treiber > AC480V 0-10V Mamay LED Driver
Fhold Ny modely tsirairay dia ahitana ny fifanoherana eo amin'ny 200Vac hatramin'ny 480Vac. Ny mpamily fiara ankehitriny dia ny FD-40V manamboatra modely maimaim-poana. Ny modely sasany dia nomena ny Class 2. Ny FD-150V koa dia mpanamory fiarakodia tsy tapaka, izay manomana modely fivoahana sy dimmable. Ny FD-240V dia mpanamory fiarandalamby.
Ny modely rehetra dia manana alofenina aluminie ary ny IP67 no manome azy - mampifanaraka azy ireo ho an'ny fampihetseham-batana. Manolotra fiarandalamby mahery vaika izy ireo, fiarovana mahery vaika sy fohy miaraka amin'ny fanarenana automatique mba hitazonana luminaires. Ny mpamily dia UL Fantatra ho an'ny Etazonia sy Kanada, ary efa zatra ny CE izy ireo.
IP67 tsy misy angovo 24/36 / 48v Contact Now
Dimmable manakaiky ny fanamoriana fiara ankehitriny Contact Now
UL / cUL 80W 100W 150W CV24 / 36V LED driver Contact Now